यी हुन् ९३ पटक चुनाव हारेका ७५ वर्षे हसनुराम ! - News 88 Post
यी हुन् ९३ पटक चुनाव हारेका ७५ वर्षे हसनुराम !
राष्टिय राेचक समाचार समाज
January 17, 2022 N88LeaveaComment on यी हुन् ९३ पटक चुनाव हारेका ७५ वर्षे हसनुराम !
काठमाडौं । मानिस आफ्नो जीवनमा नयाँ नयाँ कीर्तिमान राख्न चाहन्छ । त्यही कीर्तिमान राख्ने होडमा लागेका छन् ७५ वर्षे एक वृद्ध । उनी हुन् भारतको आगराका हसनुराम आम्बेडकरी । उनले अहिलेसम्म ९३ पटक अलग–अलग चुनाव लडिसकेका छन् ।
उनले अहिलेसम्म एक पटक पनि चुनाव जितेका छैनन् । तर चुनावमा लड्न भने छाडेका छैनन् । चुनाव हार्दा उनी निराश पनि छैनन् । खेरागढ तहसीलेको नगला दूल्हामा रहने हसनूरामले यतिधेरै चुनाव हार्नुको कारण पछाडि रोचक किस्सा छन् ।
३६ वर्षअघि एक ठूलो पार्टीका तर्फबाट उनले चुनाव लड्ने आश्वासन पाए । तर पछि उनलाई टिकट दिइएन । टिकट नदिनुको कारण जब उनलाई बताइयो तब उनले त्यो कुरालाई मनमा लिए । तबदेखि उनी हरेक चुनाव लड्दै आइरहेका छन् ।
अब यति चुनाव हारे कि रेकर्ड बनाएरै चुप लाग्ने नीति उनले बनाएका छन् ।
सन् १९४७ अगस्त १५ मा उनी जन्मे । भारत स्वतन्त्र भएको दिन । उनले राजश्व विभागमा अमिन भएर काम गरे । उनी त्यो बेलामा वामसेफमा सक्रिय थिए । सन् १९८५ मा उनले एक क्षेत्रीय दलका तर्फबाट विधानसभा चुनाव लड्नका लागि भरोसा पाए । उनलाई जागिर छाडेर चुनावी तयारीमा लाग्न भनियो ।
उनले जागिर छाडे तर टिकट दिइएन । उनले यसबारेमा पार्टीका पदाधिकारीसँग विरोध गरे । उनलाई पदाधिकारीहरुले आफ्नै छिमेकीलेसमेत नचिन्ने मान्छेलाई अरुलाई कसरी भोट दिन्छन् ? भनी टिकट नदिएको तर्क गरेछन् ।
तब उनको मनमा गहिरो गरी यो कुरा बस्यो । अनि उनले निर्दलीय चुनाव लड्ने दृढता गरे । फतेहपुर सिकरी विधानसभा सिटमा उनले १७ हजार ७११ मत ल्याए । उनी तेस्रो भए । त्यसपछि उनी लगातार चुनाव लड्लै आएका छन् ।
सन् १९८५ देखि अहिलेसम्म उनले ९३ चुनाव लडेका छन् । आगामी विधानसभा चुनावमा उनी ९४ औं पटक चुनाव लड्दै छन् । उनी सय पटक चुनाव लड्न चाहन्छन् । सबैभन्दा बढी पटक लड्ने उनी एक्ला भारतीय भएको दाबी गर्छन् ।
उनी सरकारी जागिर छाडेपछि किसान बनेका छन् । चुनाव लड्नका लागि उनले कोष खडा गरेका छन् । उनकी एक पत्नी र पाँच छोरा छन् ।
चुनाव लड्नका लागि हरेक दिन कोषमा रकम राख्छन् । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा लाग्ने बाहेक उनले चुनावमा केही पनि खर्च गर्दैैनन् ।
उनी प्रचारप्रसारका लागि घरघरमा जान्छन् । जो पार्टी र नेतालाई रुचाउँदैनन् उनीहरुले यिनै हसनुरामलाई भोट दिन्छन् । (भास्करबाट)
दुवईमा अलपत्र छोराको शव ल्याउन आर्थिक सहयोग खोज्दै भुजेल दम्पती, सके सहयाेग नसके शेयर गराैँ !
यस्ता व्यक्ति हुन्छन् धनी, जसको शरीरका यी अंगहरूमा तिल हुन्छ
कसरी बनाउने स्वादिष्ट खीर – यस्ताे छ सरल रेसिपी
July 29, 2021 N88
माधव र झलनाथसहित ११ नेता एमालेबाट निष्काशित (सूचीसहित)
कामदार भिसामा बेलायतले माग्यो १० हजार नेपाली नर्स, कति लाग्छ खर्च तलब कति हुन्छ ?
November 19, 2021 N88
मिर्गाैला र क्यान्सरसहित यी राेग लागेकाहरूलाई सरकारले मासिक ५ हजार दिने May 29, 2022
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटायाे, अब ६८ वर्षमै पाइने May 29, 2022
बजेट भाषण : किसानलाई कर्जा दिन पाँच खर्बको लघुवित्त कोष, अरू के के गरियाे घाषणा ! May 29, 2022